Quruxyada qurxinta ee qolka jiifka
Wareegyo qurxan iyo daahyo qurux badan ayaa ka caawiya inay abuuraan jawi xiiso leh qolka jiifka. Naqshadaha casriga ah ee qurxinta daaqada waxay leeyihiin fikrado badan oo asaasi ah oo loogu talagalay naqshadaynta daahyada naqshadeynta dharka.
Quruxyada quruxda badan ee qolka jiifka - damaanad-qaad gudaha ah
Wareegyada, daahyada , daahyada qolka jiifka waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo midab leh oo midabyo kala duwan leh. Cajiib waa laba daahyo. Waxay isticmaalaan dhar mid-midab ah oo ah labo midab ama dhar-dhagax iyo walxo leh qaab. Naqshadaha la midka ah ee daahyada waxay u egtahay mid xiisa badan iyo mid cajiib leh.
Isbeddel casri ah ee naqshadeynta daahyada waa mid sahlan iyo xishmeyn. Aad u qurux badan oo muuqaalkuna wuxuu u muuqdaa daahyo qurux badan oo qurux badan oo qolka jiifka ah. Waxaa lagu qurxin karaa qaabab, garters, svagami.
Qurxinta daaqada badan ee la isku qurxiyo waxaa lagu muujiyaa isku-daboolid daahyo shiidan oo leh daahyo mug leh oo ah dhar madow. Qolka jiifka waxay wax ka geysan doonaan qarsoodiga waxayna ka ilaalinayaan badanaanta iftiinka.
Culimada cusub ee naqshadaha daaqadaha waa daahyada dunta. Waxay ka kooban yihiin sheekooyin badan oo kala duwan oo ah midabada iyo qurxinta. Waxyaabaha noocan oo kale ah si tartiib ah ha u eegaan pastel, muraayadaha buluugga ah iyo dhalaal ahaan, si aan caadi aheyn ujirta midab badan.
Lambrequins marwalba way muuqdaan . Waa la daadin karaa, toosan, ciriiri, ufiiri gaar ahaan xaflad iyo qurxin daaqada.
Qolka yar ee qolka yar wuxuu u fiicanyahay in uu doorto daahyo qurux badan oo laga sameeyo derbiga ilaa derbiga. Waa inay si xor ah u dhigtaan, wax yar ka yar priborennymi. Si aad u sameyso booska u muuqda mid dheer iyo mid baaxad leh, waxa fiican inaad doorato xuddunta saqafka. Foornada nudaha ayaa lagula talinayaa in ay doortaan iftiin, si qolku u iftiin iyo iftiin badan.
Quruxyada quruxda badan ee qolka jiifka waxay ka ilaaliyaan iftiinka qorraxda, waa quruxda quruxda badan ee naqshadeynta. Waxay yihiin garoon farabadan oo gudaha ka mid ah, qolka ku raaxee raaxo iyo jilaan.
Shaxanka leh roogagga
Laminate biyuhu waa suunka
Sawirro leh ubaxyo
Naqshadeynta guri guri
Alaarmiga qallafsan ee dhalinyarada ah
Qurxinta jikada oo ka sameysan caag
Dayactir anteroom ah
Sidee loo qalabeeyaa wadiiqadii yaraa?
Gacanta albaabka gacmahaaga
Kudhinada gacmaha oo laga helo guddiyada alaabta guriga
Seating - sida loo sameeyo doorashada saxda ah?
Xilliga Dharka: Christina Aguilera waxay doorteen caqabad ku filan oo casho ah
Hoormoonka shGG - waa maxay?
Sidee loo bartaa jilibka bisad?
Vulvit - daaweynta
Ururinta dharka - gu'ga-xagaaga 2015
Sidee loo xiraa daahyada saqafka sariirta?
Bagels leh abuurka lo'da
Charlotte on labeen dhanaan
Muraayadaha muraayadaha iyo kuwa kale
Meelaha sare ee barta
Geedka nolosha - maxay tani macnaheedu yahay iyo sidee ayuu u egyahay?
Sean Penn: fashilka koowaad ee suugaanta iyo nabarradii hore ee jacaylka
Jilaaga Alec Baldwin ayaa wiilkiisa Raphael ku baabtiisay
Gabadha Julia Stiles waxay si qarsoodi ah u guursatay Preston Jay Cook
Solyanka leh baradho - qariirad
Uurka ka dib markaad cannabis ka saarto
Maxaa la xidhiidha in lagu xidho kabaha madow?
Nin wuxuu ku dhashay jinsi
Casserole leh baasto iyo hilibka duqadda ah ee foornada